Setoor,matoorro Casri Ah,noocyo Dhaliyaha Dhaliyaha - Fmwpower.com
khaladaadka guud ee curiyaha iyo hababka baarista-1
Jeneraal ciladaha caamka ah iyo dhibaato-ka-helidda hababka
Matoorrada leh korantada Noocyada matoorka ama koronto xawaaraha elektaroonigga ah waxay leeyihiin saliid kaladuwan Nidaamyada sahayda, laakiin dhaliyaha labada cutub waa maqnaansho aan cadi karin matoorro, iyo koronto AVR waxaa loo isticmaalaa in lagu xasiliyo korantada wax soo saarka. Guud ahaan, maamuleyaasha barnaamijyada barnaamijyada ama u habeeya microprocessor-ka ayaa loo isticmaalaa. The mabaadi'da aasaasiga ah ee noocyada kala duwan ee matoorrada matoorku waa isku mid, iyo Qaababka loo maareeyo khaladku waa isku mid.
Ciladaha caamka ah ee cutubku waa: unugga kuma wadi karto booska gacanta; cutubku kuma wadi karo otomatiga booska; matoorku wuu kaxayn karaa laakiin ma bilaabi karo, shaashaduna way fashilmaysaa oo qaylo-dhaan; matoorku wuu socdaa, laakiin ma gaadhi karo xawaaraha lagu qiimeeyay; matoorku wuu shaqeeyaa laakiin gubashadu waa adag tahay ama Surge; soosaarka matoorku wuu hooseeyaa (tusaale. rarku wuu xadidan yahay ama ma awoodna si loo xero ama si buuxda looma buuxin karo); korantada ama soo noqnoqoshada ma xasillin xamuulka; matoor matoor aan firfircoonayn oo hooseeya; wax culeys ah ma leh koronto; wax soo saarka AC; koronto dhaliyaha soo saarta aad ayuu u sarreeyaa Ama aad u hooseeya; wajiga hadda; xakamaynta fashilka; gambaleelka qaladka ama xiritaanka cilad inta hawlgalka socdo. Hoos waxaan ku aragnaa Soo bandhig mabaadi'da aasaasiga ah, qaababka iyo tillaabooyinka curyaamiinta casriga ahi dejiyeen cilad maaraynta.
Mabaadiida aasaasiga ah ee ogaanshaha ciladaha matoorrada casriga
Dejiyaha koronto dhaliyaha casriga ahi waa nidaam casriyeysan oo murugsan, iyo ogaanshaha ciladdiisa sidoo kale way adagtahay. Sababta unugga uusan shaqeynin ama shaqada aan caadiga ahayn waxay noqon kartaa nidaamka xakamaynta elektiroonigga ah ama qaybaha kale ee Nidaamka kontaroolka elektaroonigga ah. Dhibaatada kormeerka sidoo kale way ka duwan tahay. Haddii aad raaci karto qaar ka mid ah mabaadiida aasaasiga ah ee ogaanshaha cilad, waad isticmaali kartaa Habka fudud ee lagu ogaado dhibaatada si sax ah oo dhakhso leh.
Mabaadiida aasaasiga ah ee laxirinta cilad-sheegashada unugga waxaa lagu soo koobi karaa sidan soo socota:
1) Markay cutubku dibedda dhamaado, marka hore iska hubi qaybaha qaladka ee suurtagalka ah ee ka baxsan nidaamka kontaroolka elektaroonigga ah. Tan wuxuu ka fogaanayaa cilada aan la xiriirin nidaamka koontaroola elektiroonigga, laakiin wuxuu u qalabka dareeraha, kumbuyuutarka, jilaayaha iyo khadka. Samee kormeer isku dhafan oo leh waqti-ku-qaadasho iyo kormeer xoog leh, iyo guuldarrooyinka dhabta ah ayaa laga yaabaa inay fududdaan si loo helo laakiin lama helin.
2) Hubi meelaha khaladaadka suurta galka ah in waxaa lagu hubin karaa hab fudud. Tusaale ahaan, baarista aragga ayaa ah ugu fudud. Waxaad isticmaali kartaa habab baaritaan oo muuqaal ah sida daawashada, taabashada, iyo dhagaysi si aad u ogaato qaar ka mid khaladaadka si muuqata u dhakhso badan. Muuqaalka Habka kormeerka waxaa lagu soo bandhigi doonaa habka aasaasiga ee hoose. Marka muuqaalka Baadhitaanku ma helo cilada oo u baahan in lagu hubiyo qalab ahaan ama aalado kale oo gaar ah, waa in la hubiyaa marka hore.
3) Hore loo kariyey oo dhashay. Sababta oo ah qaab dhismeedka iyo deegaanka, ifafaalaha cilladdu waa midda ugu badan qalad guud oo ka dhaca qaar ka mid ah golayaasha ama qaybaha. Meelahan khaladka ah ee guud waa in marka hore la hubiyaa. Haddii qaladka aan la helin, hubi waxyaabaha kale ee aan macquul ahayn goobaha qaladka ee suurta galka ah. Tani waxay badanaa ka heli kartaa ciladaha si dhakhso leh, waqti badbaadin iyo dadaal.
4) Koontaroolka elektaroonigga ah ee mudnaanta la siinayo Nidaamku guud ahaanba wuxuu leeyahay cilad-baaris is-baarid. Markay korontada gacanta ku hayso Nidaamka wuxuu leeyahay nooc cillad ah, nidaamka is-baarista ciladdu isla markiiba ayaa yeelanaya Soo ogow cilada oo u digto hawlwadeenka adigoo isticmaalaya nalalka digniinta sida “kormeeraha matoor ”ama jawaab. Isla mar ahaantaana, macluumaadka khaladka waxaa lagu kaydiyaa koodh. Cilladaha qaar, ka hor inta aan nidaamka baaritaanka is-baadhitaanka la baarin, ciladdu koodh waa in loo akhriyaa iyadoo loo eegayo habka uu soo saaraha soo saaray, iyo meesha qaladka uu ku tilmaamay koodh waa in la hubiyaa oo laga saaro. Kadib ciladdii uu muujiyey koodhkii qaladka ayaa la tirtirayaa, haddii ciladdu mashiinka ku dhacdo ifafaale lama baabi'in, ama haddii uusan jirin wax qalad ah oo soo baxay laga bilaabo, ka dibna khaladka suurtagalka ee mashiinka la hubiyaa.
5) Ka fikir intaadan sameyn falanqaynta khaladaadka on ifafaale qaladka ah ee matoor dejiyaha, ka dibna sameeya baaritaanka hubinta khaladka aasaaska fahamka sababaha suurta galka ah ee cilada. Sidan,, indho la’aanta baarista cilada waa laga fogaan karaa. Ma dhumineyso qaybaha kuwaas oo aan la xiriirin ifafaalaha khaladka, iskana ilaalin karaan kuwa seegay ogaashada qaybo ka mid ah laxiriirta isla markaana si dhakhso leh ugama baabi'in karto cilada.
6) Kadib isticmaalka, waxqabadka qaar qaybo ka mid ah nidaamka xakameynta elektiroonigga ayaa wanaagsan ama xun, iyo korantada Wareegtadu waa caadi ama maya, inta badan waxaa lagu xukumay cabbirro sida koronto ama qiimaha iska caabin. Xogtaas la'aanteed, nidaamka guuldaraysiga nidaamka ayaa noqon doona adag, badanaana kaliya qaabab badalaad oo cusub ayaa la qaadan karaa. Kuwani hababku mararka qaarkood waxay keenaan in kharashyada dayactirka ay kordhaan iyo shaqada iyo waqtiga. The waxa loogu yeedho isticmaalka kadib isticmaalka macnahiisu waxa weeye marka nooca cutubka la dallaco, xogta dayactirka ee laxiriirta nooca cutubka waa in la diyaariyo. Intaa waxaa dheer xogta dayactirka, hab kale oo wax ku ool ah waa in loo isticmaalo cutubka bilaa khaladka ah cabiraan cabbirrada nidaamka ee ku habboon oo u diiwaan geli sida isbarbar dhiga xudunta baarista cutubka isla mustaqbalka. Haddii aad badiyaa bixiso fiiro gaar ah u yeelo qabashada shaqadan, waxay u fududeyn doontaa qaladka nidaamka hubin.
Fiiro Gaar ah: Guuldarrooyinka qaybaha ma aha daruuri ku tahay nidaamka xakameynta elektaroonigga ah. Haddii set koronto dhaliyuhu leeyahay khaldan yihiin oo iftiinka digniinta cilad aan la shidin (koodh qalad ah lama soo bandhigo), Xaaladaha badankood, ciladdu waxaa la hubiyaa iyada oo la raacayo habraacyada ogaanshaha aasaasiga ah. Haddii kale, waxaad la kulmi kartaa cilad aan la xiriirin elektaroonigga nidaamka xakameynta, laakiin waqti badan ayey qaadataa in la hubiyo dareemayaasha, jilayaasha iyo wareegyada nidaamka xakamaynta elektiroonigga, laakiin khaladaadka dhabta ah lama helin.
Akhriska La Xiriira: Diesel Generator Setures , Diesel Engine Generator Set , Ricardo Generator Set
Generator Set Meelaha Casriga ah Diesel Generator Setures
Hore : khaladaadka guud ee curiyaha iyo hababka baarista-2
Xiga : sida loo joojiyo garsoorka si sax ah